Aung Thar Nge – Web Surf Security | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Mann Win Maung – Ludu U Hla according to me
Cartoon Maung Yit – Unitity is Strength for Tatmadaw not for the opposition !!! →
Aung Thar Nge – Web Surf Security
ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပို့စ် ၂ ခုကို ဖတ်ပြီးတော့ သယ်ရင်းတွေလည်း အတော် စိတ်ညစ် သွားကြပုံ ရပါတယ်။ စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ … သိသင့် သိထိုက် တာလေးတွေ ပြောပြတာပါ။
တခုကတော့ WOT (Web of Trust) ပါ။
ဒီ Add-on ကို FireFox မှာ Install လုပ်ထားရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Web Site တွေကို ကိုယ် သွားမိတဲ့ အခါ သူက သတိ ပေးပါတယ်။ လင့်တွေရဲ့ အဆုံးမှာ အစိမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အ၀ါရောင် အ၀ိုင်းလေးတွေနဲ့ ပြထား ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ကတော့ အန္တရာယ် မရှိ၊ အနီရောင်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိ၊ အ၀ါရောင် ဆိုရင်တော့ ဘာမှန်း မသိသေးဘူးပေါ့လေ။
Web site က ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိရင် ဘေးမှာ အစိမ်းရောင် အ၀ိုင်းလေးနဲ့ ပြထားပါတယ်။
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Web Site တွေဆို အနီရောင် အ၀ိုင်းနဲ့ ပြပါတယ်။
အနီရောင် ပြထားတဲ့ လင့်ကို မတော်တဆ နှိပ်မိလို့ ရောက်သွားရင်လည်း WOT Add-on က အဲလင့်ကို ချက်ချင်း မဖွင့်ပေးပါဘူး။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Warning ပေးပါတယ်။
ဘာပဲ ပြောပြော ဘာမှ မရှိတာထက် စာရင်တော့ တခုခု ရှိနေတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
အဲ Add-on ကို install လုပ်ဖို့ ပထမဆုံး ဒီကို သွားပါ။ ပြီးရင် Add-ons မှာ All Add-ons ကို သွားပါ။ Search for Add-ons box မှာ WOT ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဘေးမှာ တွေ့ရမယ့် Add to FireFox ဆိုတဲ့ button လေးကို click လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Install button ကို click လုပ်ပါ။ install လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ အဲ Add-on အသက်ဝင်လာဖို့ FireFox ကို Restart လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ Navigation Bar မှာ Address box ဘေးမှာ အ၀ိုင်းလေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တခုကတော့ NoScript ပါ။
သူကလည်း Web site တွေကို ဖွင့်ရင် run လေ့ရှိတဲ့ Java script နဲ့ တခြား အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာ (executable program) တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ Add-on ပါ။ Web site တခုကို ဖွင့်လိုက်ရင် အန္တရာယ် ရှိနိုင်တဲ့ အရာတွေကို ဒီ Add-on က disable လုပ်ထားပါတယ်။ ကိုယ် စိတ်ချတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ site အတွက် အမြဲတမ်း allow လုပ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ စိတ်မချရင်တော့ forbid လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ယာယီ allow လုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။
ဒီ Add-on ကို WOT ကို install လုပ်သလိုပဲ လုပ်ရမှာပါ။ search for Add-ons box မှာ NoScript ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Add to FireFox ဆိုတဲ့ button လေးကို click လုပ်လိုက်ပါ။ ပီးရင် install လုပ်ပြီး သွားရင်တော့ FireFox ရဲ့ အောက်ဆုံးက status bar မှာ S စာလုံးနဲ့ အ၀ိုင်းလေး တခုကို တွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ စမ်းသပ် ကြည့်ကြ ပါပေါ့လေ။
သယ်ရင်းတွေ ညီအကို မောင်နှမတွေ အကယ်၍ FireFox သုံးတယ်ဆိုရင် အထက်က ကျနော် ပြောခဲ့တဲ့ Add-on လေး ၂ ခုကိုတော့ Install လုပ်ထားကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါပဲ။
ဒီပို့စ်မှာတော့ သည်လောက်နဲ့ပဲ တော်ဦးမယ်။ စိတ်ညစ်ကုန်ကြမှာ စိုးလို့ပါ။ နောက်ပို့စ် တွေမှာမှ အသုံးဝင်တဲ့ တခြား ပရိုဂရမ်တွေ အကြောင်း ပြောပြပါဦးမယ်။
(အောင်သာငယ် ဘလော့က ယူသုံးပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါ။ http://aungthange.blogspot.com/2009/02/blog-post_12.html )
Posted by oothandar on February 19, 2009 in Technology